Iindaba - Ingqalelo kusetyenziso lwetanki yenitrogen engamanzi
Sitsalele umnxeba: 0086-28-82724106
Izicelo kuMmandla woKutya
Isicelo seNdawo yoShishino
Iimveliso ezenzelwe wena
Ingqalelo yokusetyenziswa kwetanki yenitrogen engamanzi
Izilumkiso ngexesha lokusetyenziswa kwetanki yenitrogen engamanzi:
1. Ngenxa yobushushu obukhulu betanki ye-nitrogen yolwelo, ixesha lokulingana kwe-thermal lide xa i-nitrogen engamanzi igcwaliswa kuqala, inokuzaliswa ngenani elincinci le-nitrogen engamanzi ukupholisa kwangaphambili (malunga ne-60L), kwaye ke ngokucothayo. izaliswe (ukuze kungabikho lula ukwenza i-ice Blocking).
2. Ukuze kuncitshiswe ilahleko xa kuzaliswa ulwelo nitrogen kwixa elizayo, nceda phinda ulwelo nitrogen xa kusekho isixa esincinane senitrogen engamanzi kwitanki nitrogen engamanzi. Okanye ugcwalise ngenitrogen engamanzi kwiiyure ezingama-48 emva kokusebenzisa initrogen engamanzi.
3. Ukuqinisekisa ukhuseleko kunye nokuthembeka kwetanki yenitrogen engamanzi, itanki yenitrogen engamanzi inokuzaliswa kuphela nge-nitrogen engamanzi, ioksijini engamanzi, kunye ne-argon engamanzi.
4. Amanzi okanye iqabaka kumphezulu wangaphandle itanki yenitrogen engamanzi ngexesha lokugalelwa yinto eqhelekileyo. Xa ivalve ye-booster yetanki ye-nitrogen yolwelo ivulelwa umsebenzi wokunyusa, ekubeni i-booster coil iqhotyoshelwe kudonga lwangaphakathi lwe-cylinder yangaphandle yetanki ye-nitrogen engamanzi, i-nitrogen engamanzi iya kufunxa ngaphandle xa i-nitrogen engamanzi idlula kwikhoyili. yetanki yenitrogen engamanzi. Ubushushu bombhobho buvuthululwe ukuphumeza injongo yokunyusa uxinzelelo, kwaye kusenokubakho iqabaka efana nebala kumbhobho ongaphandle wetanki yenitrogen engamanzi. Emva kokuvala ivalve ye-booster yetanki yenitrogen engamanzi, iindawo zeqabaka ziya kutshabalala kancinci. Xa ivalve ye-booster yetanki ye-nitrogen engamanzi ivaliwe kwaye akukho msebenzi wokugalela wenziwa, kukho amanzi kunye neqabaka kumphezulu ongaphandle wetanki yenitrogen engamanzi, ebonisa ukuba i-vacuum yetanki yenitrogen engamanzi yaphukile, kunye nolwelo. Itanki yenitrogen ayinakusetyenziswa kwakhona. Kufuneka ilungiswe okanye ichithwe ngumenzi wetanki yenitrogen engamanzi**.
5. Xa uthutha i-liquid nitrogen media ezindleleni ezinebakala lesi-3 okanye ngaphantsi, isantya semoto kufuneka singadluli kwi-30km/h.
6. Umbhobho wokufunxa kwitanki yenitrogen engamanzi, itywina levalve yokhuseleko, kunye netywina elikhokelayo alinako ukonakala.
7. Ukuba itanki yenitrogen engamanzi ayisetyenziswanga ixesha elide, nceda ukhuphe i-nitrogen medium engamanzi ngaphakathi kwetanki yenitrogen engamanzi kwaye uyivuthele yome, emva koko uvale zonke iivalvu kwaye uyitywine.
8. Phambi kokuba itanki yenitrogen engamanzi izaliswe ngolwelo lwenitrogen medium, umoya owomileyo mawusetyenziswe ukomisa i-container liner nazo zonke iivalvu nemibhobho phambi kokuba izaliswe ngolwelo lwenitrogen medium, kungenjalo iya kubangela ukuba umbhobho umkhenkce kwaye uvaleke; okuya kuchaphazela ukwanda koxinzelelo kunye nokufakwa. .
9. Itanki yenitrogen engamanzi yeyodidi lwesixhobo kunye nemitha. Kufuneka iphathwe ngononophelo xa uyisebenzisa. Xa uvula iivalve zetanki ye-nitrogen yamanzi, amandla kufuneka abe yimodareyitha, angabi namandla kakhulu, kwaye isantya akufanele sikhawuleze; ngakumbi i-hose yensimbi yetanki ye-nitrogen engamanzi Xa udibanisa i-joint kwi-valve ye-drain, musa ukuyigqithisa ngamandla anamandla. Kwanele ukuyijija kwindawo yakho ngamandla amancinci (isakhiwo sentloko yebhola kulula ukutywinwa), ukuze ungajingi umlomo wetanki ye-nitrogen okanye uyijike. Bamba itanki yenitrogen engamanzi ngesandla esinye.
Ixesha lokuposa: Aug-31-2021
Fumana IQuote yasimahla